Khabar Kantipur » सरकारले यसकारण लगायो पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध ! के हुन्छ पब्जीमा ?
सरकारले यसकारण लगायो पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध ! के हुन्छ पब्जीमा ?
सुरुमा कम्प्युटरमा मात्रै खेल्न मिल्ने बनाइएको भएपनि अहिले ‘पब्जी मोबाइल’ बनिसकोके छ । मोबाइलमा निःशुल्क चल्ने हुँदा यो सामान्य मान्छेको पहुँचमा पुग्यो ।
यसको ‘कन्ट्रोलिङ पावर’ राम्रो हुने, साथीहरुसँग मिलेर कुराकानी गर्दै खेल्न मिल्ने भएकाले पनि छिटो नै फैलिन पुग्यो । सामान्यतः दुई जीबी ¥याम भएको मोबाइलमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदा राम्ररी चल्ने भएकाले पनि अरु भिडियो गेमको तुलनामा यसको विस्तार छिटो भएको हो ।